SP-G06 SOICARE imba mini 100ml aromatherapy ultrasonic mweya humidifier yakakosha mafuta diffuser, China SP-G06 SOICARE imba mini 100ml aromatherapy ultrasonic mweya humidifier yakakosha mafuta diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries limited
SP-G06 SOICARE imba mini 100ml aromatherapy ultrasonic mweya humidifier yakakosha mafuta diffuser
SOICARE imba mini 100ml aromatherapy ultrasonic mweya humidifier yakakosha mafuta diffuser
· ►HOMEWEEKS 100ML MULTIFUNCTIONAL PORTABLE DIFFUSER - Inogona kushandiswa seAromatherapy Diffuser, Humidifier kana Night-mwenje, Unogona kuunza parwendo rwako neyakagadzirwa dhizaini. Kune akawanda mavara uye anotenderera mavara akasarudzwa kuti agadzire akanaka ambience mune yako yekurara usiku.
· ►SIMPLE KUNYANYA KUSHANDISA - Iyo diffuser inodzima yega kana iyo mvura / oiri chikamu chakanyanya kushoma kana nguva yakwana, izvo zvinogona kuvimbisa kuchengetedzeka uye rugare rwepfungwa .Zviri nyore kumisikidza uye mabasa ese ari nyore kushanda, kunyangwe mwana aigona kuzviziva.
· ► HOMEWEEKS ultrasonic mhute humidifier inopa yakasviba yakanaka uye yakasviba mhute iyo inogona kunyorovesa nzvimbo yako yekugara uye moisten yakaoma ganda. Izvo zvakare zvinobatsira iwe kufema zvirinani kana iwe uri kurara nemhepo conditioner iri.
· ►PERFECTLY RELEASE YAKO FATIGUE - Isa iyo yakakosha mafuta mukati, Iyi yakakosha mafuta diffuser inozadza iyo nzvimbo nekunhuhwirira kwakanaka kunogona kusimudzira mweya uye kubvisa kushushikana kubva kunetsekana uye kuneta zuva, yakakwana yekuviga kusindimara kuputa uye hwechipfuhwi hwema, batsira kuwana rugare hope dzakakomberedzwa nekunhuhwirira kwakanaka.
max yekushanda nguva
kupima poto, bhuku remanyorero, adapter
munhuwi 15 m², humidifer 8m²
SP-T2 SOICARE 300ml Inotakurika Ultrasonic Kutonhorera Mist Kugadzira USB Mota Mhepo Sprayer Mini Humidifier